Aprịkọ ọhịa Anụmanụ: Otu Ndị Na-akwụ Allgwọ Na-enweghị Nhazi | Martech Zone
Dịka otu dị iche iche na-elepụ anya n’ọdịnihu, otu ohere bụ iwulite ndị otu na-akwụ ụgwọ. Mkpakọrịta, enweghị uru, ntọala, klọb, otu egwuregwu, otu ọzụzụ, na ụlọ ọrụ azụmahịa niile chọrọ nyiwe iji jikwaa ọnụnọ dijitalụ ha, obodo nkwukọrịta, ihe omume, ndebanye aha, akwụkwọ ndekọ aha, na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Apricot Anụ abụrụla onye ndu na ụlọ ọrụ a, yana usoro ikpo okwu maka ijikwa azụmaahịa ụdị ndị otu akwụ ụgwọ. Ihe karịrị òtù 30,000 na-eji Aprịkọt Anụ ọhịa adọta, itinye aka na ichekwa ndị otu ha.
Anụ ọhịa Aprịkọl Otu Ndị Nọmba Nweta Platform Gụnyere:
Ndị òtù Ngwa - Ahịa Apricot so na njikwa sọftụwia na - arụ ọrụ ngwa ngwa iji nyere ndị ọhụrụ gị aka ịghọta echiche izizi. Bipu akwukwo ederede di mgbagwoju anya site na imeputa web-based, mobile-friendly form ebe ndi choro nwere ike inye gi ihe omuma ichoro ma kwụọ ụgwọ na ịntanetị site na kaadị akwụmụgwọ.
Ndị mmeghari ndị otu - Gbanyụọ ọrụ nhazi gị site na ịnye ndị otu nhọrọ nhọrọ onwe ha: ha nwere ike imeghari ndị otu ha n'otu ntabi anya site na ịbanye na profaịlụ ha. Ha nwekwara ike iji aka ha melite ozi ịkpọtụrụ ha, denye aha maka ihe omume, ma kwụọ ụgwọ ndị otu na kọmputa ha ma ọ bụ site na ekwentị ha.
Otu data - Ndị ọrụ afọ ofufo na ndị otu ụlọ nwere ike ịnweta otu nchekwa data ahụ n'ịntanetị, na mmelite nke ihe ndekọ ndị otu gị na-eme ozugbo, yabụ data gị na-adị mgbe niile. Nwere ike ịbubata ozi ndị otu gị na ntanetị ma hazie nchekwa data iji kwado mkpa gị.
Akwụkwọ ndekọ ndị otu - Ma ị mepụtara ndekọ ọha na eze nke azụmaahịa ndị otu gị, ma ọ bụ wuo ndekọ naanị ndị otu gị nwere ike ịhụ, ị ​​nwere ike ijikwa ozi nke ndekọ ọ bụla na-egosi. Ma ma e wuru weebụsaịtị gị na Aprịkọrị ọhịa ma ọ bụ n'elu ikpo okwu ọzọ, ị nwere ike itinye akwụkwọ ndekọ aha ndị enyi na-akpakọrịta na weebụsaịtị gị.
Websitetù weebụsaịtị You nwere ike ịmepụta mkpokọta enyi na enyi na ebe nrụọrụ weebụ na Anụ Aprịkọt na-arụpụta ihe na-dobe, ma ọ bụ tinye atụmatụ ndị otu na weebụsaịtị gị dị ugbu a site na itinye akwụkwọ anamachọihe ndị otu, akwụkwọ ndekọ, na ndepụta mmemme dị ka wijetị. N'ezie, saịtị ahụ gụnyere blọọgụ na forums iji soro ndị òtù gị.
Ndị otu-Peeji naanị - nwere ike iwulite njikọ nke ndị otu site na ịnye ohere ịnweta naanị ibe weebụ, dị ka ọgbakọ ịkparịta ụka n'andntanet na blọọgụ pụrụ iche. I nwekwara ike hazie ọkwa ndị otu ma ọ bụ otu dị iche iche ịchọrọ ịnweta ibe ọ bụla.
omume Management - ndenye ihe ntanetị na ntanetị na-ewe nsogbu site na ihe ndị na-agba ọsọ. N'ime nkeji ị nwere ike ịmepụta ndepụta ihe omume zuru ezu yana nkọwa na onyonyo, gbakwunye ụdị ndebanye ndebanye na ntanetị. A ga-edepụta ihe omume gị na kalenda na saịtị Wild Apricot gị ma ọ bụ weebụsaịtị dị ugbu a ka ị ghara ịbanye na ozi ahụ, ndị otu gị nwere ike ịlele ihe omume ahụ site na ekwentị ma ọ bụ kọmputa ha.
PCI na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ - Ahịa apricot na-arụ ọrụ na ntanetị na-ewe iwe isi na ịnata na nsochi ịkwụ ụgwọ na ijikwa ego nzukọ gị. Ndị otu gị na ndị na - akwado gị nwere ike ịkwụ ụgwọ ntanetị na kọmputa ha ma ọ bụ ekwentị ha maka ụgwọ ndị otu, ụgwọ ndebanye aha, na onyinye, ma ọ bụ setịpụ ịkwụ ụgwọ ugboro ugboro iji chebe oge na nsogbu. Nwekwara ike ịtọ ọtụtụ ụtụ isi ahịa ma ọ bụ VAT site na ịpị aka ole na ole, ma tinye ha n'ọrụ na ntanetị na ntanetị na mkpokọta ị họọrọ. A na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ anụ ọhịa Wild site na AffiniPay, onye na-eweta ihe nkwụnye ụgwọ nkwụnye ụgwọ nwere afọ iri na ise.
Invoicing - Ozugbo ekwesịrị ịkwụ ụgwọ ịntanetị, a na-emepụta ndekọ ịkwụ ụgwọ na akpaghị aka, ma meziwanye akwụkwọ ọnụahịa metụtara ya. I nwekwara ike ịtọ omume ndị ọzọ ka ịmalite, gụnyere ịgbalite ndị otu ma ọ bụ izipu ozi ịntanetị, nnabata ndebanye aha, ma ọ bụ nkwenye onyinye.
Nkwupụta ego - Site na mkpesa ego anụ ọhịa nke Aprịkọt, ị nwere ike nweta nkọwa zuru oke banyere ego ụlọ ọrụ gị na-enweghị mkpa ka ị nwee ọtụtụ akwụkwọ. Cannwere ike idekọ ịkwụ ụgwọ emere site na ego wee lelee Wild Apricot yana ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, yabụ data ịkwụ ụgwọ gị niile dị n'otu ebe. I nwekwara ike mbupụ data ego gị na Excel ma ọ bụ QuickBooks.
Onyinye N'ịntanetị - Tụgharịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ka ọ bụrụ ngwá ọrụ nchịkọta ego dị ike. Site na iji ngwanrọ nhazi ịntanetị ị nwere ike ịtọlite ​​onyinye onyinye na weebụsaịtị gị, yabụ ndị ọbịa na saịtị gị nwere ike inye nkwado ego ịchọrọ site na ebe ọ bụla.
email Marketing - Mee ndị ọkachamara na-ele anya site na ndebiri ndebanye aha anyị na mobile ma zipu ozi ịntanetị na-enweghị njedebe Bipụta akwụkwọ ndebanye aha na weebụsaịtị gị, ma ọ bụ zube ozi ịntanetị gị site na ịmepụta ndepụta ndị nnata dabere na njirisi ọ bụla, dị ka ọnọdụ ndị otu ma ọ bụ ịga mmemme. Nwere ike ịchọpụta etu mkpọsa email gị si arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ na nnyefe, mepee, yana njikọ pịrị maka ozi ọ bụla na kọntaktị ọ bụla.
Ozi ịntanetị akpaaka - Wepụta obere oge iji aka izipu ozi ịntanetị site na ịtọ nkwenye email na akpaaka maka ncheta maka ndị otu, ihe omume na onyinye. You nwere ike hụ na ndị otu gị ka ga-enweta ahụmịhe nkeonwe site na ịhazi ozi na iji email macros (nke yiri mpaghara njikọta ozi).
Onye nchịkwa Mobile App - Jikwaa akwụkwọ ọnụahịa ma dekọọ ụgwọ site na ekwentị mkpanaaka gị na ngwa ngwa anụ ọhịa Wild Apricot maka ndị nchịkwa. N'ihi na ihe, ị nwere ike ijikwa kọntaktị na ego-na ihe omume registrants site na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Ihe omume Mobile App - Nyere ndị otu gị aka ka ha jikọta ibe ha ma ọ bụ ọha na eze site na iji ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha ndị na-adịkarị ọhụrụ.
WordPress Plugin na Single banye - Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na saịtị WordPress, ịnwekwara ike iji Aprịkọt Anụ ọhịa maka otu ntinye aka, na-etinye wijetị, na igbachi ọdịnaya maka ndị otu naanị.
Gbalịa Aprịkọrị Anụhịa n'efu maka ụbọchị 30
Ngosi: Abụ m mmekọ Apricot Anụ
Tags: Njikọ mkpakọrịtamkpakọrịtanjikwa ọgbakọklọbecommercendebanye aha mmemmenjikwa ntọalantọalaikpo okwu ndi otuso na ngwanrọnjikwa na-abụghị urundị na-abụghị uruotu egwuregwunjikwa egwuregwuọzụzụ weebụsaịtị